Breastmilk weaning – My Doctor
မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းဟာ မိဘနဲ့သားသမီးအကြား အလွန်ကြီးမားခိုင်မာတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတစ်ချောင်းကို တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တန်တဲ့အခါမှာတော့ သားသားမီးမီးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခြားအစားအစာတွေကအဓိက ကျလာတဲ့အခါ၊ မေမေ့ရဲ့အခြားသောအလုပ်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်လည်ခြေချဖို့လိုလာတဲ့အခါ နို့ဖြတ်ဖို့လိုအပ်လာပါတော့တယ်။ ဒီတော့ မေမေ့နို့ချို ဘယ်အချိန်ဆိုဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲ..?
ဘယ်အချိန်နို့ဖြတ်ကြမလဲဆိုတာကတော့ မိခင်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့သဘောထားနဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ဆက်လက်စို့ချင်စိတ်နဲ့ပဲ အဓိကဆိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ဖြည့်စွက်စာကိုအဓိကကျွေးရမယ့် ခြောက်လကျော်အချိန်မှာ နို့တစ်မျိုးကိုပဲ တိုက်မနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် မိခင်အများစုဟာ ကလေးအသက်တစ်နှစ်မှနှစ်နှစ်အတွင်းနို့ဖြတ်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကလေးတွေကို နို့ဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲ?
ကလေးငယ်များဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ သူတို့ခံစားစရာ အရသာတွေစုံစုံလင်လင်သိလာတဲ့အတွက် အချို့ဟာ အလိုလိုနို့ပြတ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ မေမေတို့အတွက် အတိုင်းထက်အလွန်အဆင်ပြေတာပေါ့။ အကယ်၍များ အမေကသာ နို့စဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ရုတ်တရက် တိကနဲမဖြတ်မိဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးကိုမတွေ့ဘဲခရီးထွက်လိုက်ခြင်း၊ နို့ဆွဲနေပေမယ့် နို့တိုက်ရန်ငြင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာ ကလေးအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ရသွားနိုင်သလို မိခင်မှာလည်း နို့ချောင်းပိတ်ခြင်းဝေဒနာကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိခင်တို့အနေနဲ့ နို့ဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်
၁။ နို့တိုက်ချိန်ကို တစ်ချိန်စာ ကျော်ကျော်ပြီးတိုက်ပါ။
ပုံမှန်နို့တိုက်ချိန်မှ တစ်ချိန်စီလျှော့လျှော့သွားမယ်ဆိုရင် ကလေးများအတွက်ရော အမေ့အတွက်ပါအဆင်ပြေလာမှာပါ။
အရင်က နာရီဝက်နို့တိုက်ရင် အခု ဆယ့်ငါးမိနစ်သာတိုက်ပါ။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနို့ပြတ်လာမှာပါ။
နို့တိုက်နေစဉ် ကလေးငယ်အား အရုပ်နှင့်ဖြစ်စေ၊ လူအများနှင့်ဖြစ်စေ မြှူချော့ကာ ရုတ်တရက်အာရုံလွှဲပြီးနို့ဆက်မတိုက်ရန်ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ဒီလိုနဲ့ ကလေးငယ်နဲ့မိခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေမပျက်ယွင်းဘဲ သားသမီးများနို့ပြတ်သွားမှာပါ။
admin2	2018-09-13T10:40:05+00:00	September 13th, 2018|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|0 Comments
PMDD and suicide relation
Nasal discharge blockage in children
How does Spinal anaesthesia work in LSCS (lower segment cesarean section)
Bow-Leg and knock-kn ee in Children and how to prevent it
Can breastfeeding make your breasts less attractive?